Qaar kamid ah Goobaha Gancsiga Guriceel oo xiran | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Qaar kamid ah Goobaha Gancsiga Guriceel oo xiran
Waxaa Maanta gebi ahaan xiran qaar kamid ah Goobaha Ganacsiga ee kuyaal degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka taagan tahay xiisad dagaal.
Ganacsatada qaarkood ayaa waxaa ay ku sheegeen sababta ay u xireen Goobahooda Ganacsiga cabsi laga qabo in degmada Guriceel ay ku dagaalamaan Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug oo dhinac ah iyo Ciidamads Ahlusunna ee dhawaan la wareegay degmada Guriceel.
Sawiro laga soo qaaday Goobaha Ganacsiga degmada Guriceel ayaa la arkayay inta badan Goobaha Ganacsiga oo xiran, isla markaana dadweynaha ay si teel teel ah wadooyinka Magaalada u marayaan.
Dhinaca kale Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ka yimid dhinaca Magaalada Dhuusamareeb ayaa dhaq dhaqaaqyo Ciidan waxaa ay ka wadaan duleedka degmada Guriceel taas oo cabsi ku abuurtay Bulshada Magaalada.
Beesha Caalamka oo ku baaqay in doorashada laga dhigo mid daah furan
Khilaaaf ka taagan in xilka lagu wareejiyo Agaasimaha uu Deni u Magacaabay Ciidanka PSF
DHAGEYSO:-Warka Habeenimo Radio Baidoa 26-11-2021
Beesha Caalamka oo ku baaqay in doorashada laga dhigo mid daah...
Khilaaaf ka taagan in xilka lagu wareejiyo Agaasimaha uu Deni u...